आज गोवर्धनपूजा, गाई र गोरुको पनि पूजा गरिँदै – RadioMBC
Home > Front News > आज गोवर्धनपूजा, गाई र गोरुको पनि पूजा गरिँदै
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०९:१६
आज गोबर्धन पूजा अर्थात् यम पञ्चकको चौथो दिन । काग, कुकुर गाई हुँदै आजको दिन प्राचिन कृषि कार्यमा संलग्न जीव गोरुको पूजा गर्ने गरिन्छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा आजको दिनले अाफ्नो अणुवांशिक पहिचान गुमाएर साँढेबाट हल गोरूमा परिणत जीवले हाम्रो कृषि जीवनमा राखेको महत्वका कारण सम्झिने गरिन्छ ।
आजको दिनको अर्को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक रौनक हो, देउँसी ! अनि तपाईको के छ त योजना ?
साक्षर घोषणा गरिएको जिल्लामा नै अन्धविश्वास कुरीतिले जरा
भुल भुलैया को भुमरीमा